Mee atụmatụ n'ihu iji kwụsie ike karị-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Mee atụmatụ tupu ị kwụsie ike
Oge: 2020-08-27 Hits: 26
Naanị mgbe 2020 gasịrị, ọtụtụ ihe ndị ojii ojii mere, ihe ojii ahụ na-egosi obere ihe a na-atụghị anya ya. Ọ gbanwere ihe niile na-atụghị anya ya.
Enwere ike ịnwe "nnụnnụ ojii" n'azụ onye ọ bụla.
Ọhụrụ coronavirus ntiwapụ bụ doro anya na "nwa Swan mere", nke nwere ike ime otu ugboro n'ime iri afọ. Mana ọ bara uru ịmara na n'ihu ọnụ ọgụgụ nke mụ na gị bụ ndị na-adabere na ụgwọ na ụgwọ iji kwado ndụ ha, "Black Swans" na-anọ mgbe ụfọdụ. Ndụ jupụtara na ejighị n'aka na qualitative, "ezigbo njem" nwere ike ịbụ naanị ezi ọchịchọ anyị.
Ozugbo "Black Swan" rutere, ọ nweghị onye nwere ike ijide n'aka na ọ ga-adị ndụ. Buffett kwuru "Ọ bụ naanị mgbe ebili mmiri na-apụ na ị maara onye na-agba mmiri ọtọ" Ihe anyị chọrọ abụghị naanị ego dị elu, kamakwa ịmara ezigbo nsogbu, yana nchebe megide ikpughe ihe egwu na izere igwu mmiri gba ọtọ.
Ọtụtụ oge, ụbụrụ ga-eleghara ihe a na-atụghị anya ya, nke a na-ejighị n'aka, na nke na-adịghị agbanwe agbanwe na eziokwu iji nwee obi ụtọ. Mgbe odi nkpa, anyi aghaghi icheghari echiche nke uburu. Nọgide na-enwe ezigbo ego maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ na-azaghachi "nwa nnụnnụ mmiri" nke nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla. Nnukwu ihe ịma aka n'ịhapụ ịhapụ gị bụ ịnagide mmụọ ọjọọ nke gị - ebumpụta ụwa ebumpụta ụwa nke inwe, ihe efu na anyaukwu na ọdịdị mmadụ. Ọ bụghị ịhazi ihe na ịchụpụ ihe n'ajụghị ase, ọ bụghịkwa iwepụ otu sọftụwia ịzụ ahịa n'ụzọ zuru ezu. Ọ bụ ịmebi usoro ihe oriri anyị na usoro iche echiche. Bipụ ihe ndị ị na-achọghị. Nye aka, tufuo oke, hapụ echiche na ọchịchọ.
Ugbu a maka onwe gị, hapụ ihe ị na-achọghị. Hapụ, ndụ nwere ike ịga n'ihu.
Mee atụmatụ tupu ị kwụsie ike. Kpachapụ anya na-eme atụmatụ gị ọrụ atụmanya na ezinụlọ akpan owo oke, na-etinye ọrụ n'ihu, ị nwere ike maa bụghị-atụ egwu nke kasị "nwa Swan" mere
Nke mbu, kwusi igba kredit. Zụlite atụmatụ ịkwụ ụgwọ bara uru iji kwụọ ụgwọ ụgwọ ndị dị ugbu a n'oge enwere ike.
Nke abuo, malite ịmanye ego. Ozugbo akwụ ụgwọ ụgwọ dị mkpirikpi, a ga-eji 10% nke ego ọ bụla manye ego. Ka anyi tulee na ego belatara site na 10%. Nke a agaghị emetụta ndụ anyị, mana ọ nwere ike inyere anyị aka ịzụlite njikwa njikwa akụ na ụba nke "itinye ego na mbụ, mgbe ahụ oriri". Mgbe ego echekwara iji kwado mmefu obibi maka ọnwa 3-6, ego echekwara nwere ike ịdabere na ebumnuche ego na nnagide ihe ize ndụ nke ọkwa ọ bụla nke ndụ, yana oke oke akụ dị n'etiti akaụntụ kwụsiri ike na akaụntụ itinye ego.
Nke atọ, zụta mkpuchi azụmahịa. Echela n'ihi na anyị amaghị mgbe ihe egwu dị. Ọ dịghị onye ga-eche na na mmalite nke 2020, a ga-enwe ntiwapụta nke oyi baa na-emetụta nke ukwuu; ọ dịghị onye ga-eche na Kobe, 41, ga-egbu n'ihe ọghọm.
Nke a bụ ejighị n'aka nke ihe egwu. Enwere ike ịsị na ọ bụ akara aka nke onye ọ bụla n'ime anyị. Prekpachara anya, igbochi nsogbu tupu ha emee, na ịhazi usoro nkwekọrịta zuru oke bụ ụzọ kachasị mma iji merie ihe egwu dị otu a.
Ọ bụrụ na ihe omume Black Swan ọzọ ga-eme ọzọ, enwere m olileanya na anyị nwere ike iji nwayọ nagide.
Previous: Ọrịa na-adịghị obi ọjọọ, ịhụnanya na-ahụ n'anya
Ọzọ: Obi ụtọ na Women'sbọchị Women'smụ nwanyị Mba !wa!